Iguzosi ike n'usoro
Ngwongwo ihe ngosi
Ọkachamara na ngosi & mmepụta ihe maka + 10 afọ
Atụmatụ Ụkwụ Na-eguzo
Ezigbo & Ibu
Ihe owuwu ndị ọzọ
Ụlọ Ọhụụ Ụlọ Ahịa Ọdịdị
Ihe osise & Signage
Ihe ngosi Wall Panel System
Ụlọ & Stool
Onye Nyocha na Broshuọ
Ọrụ dị arọ
Ogidi dị iche iche
Anyị na-eche ihe anyị na-ekwe nkwa
Mmeju afọ nke ndị ahịa, Diginity nke Onye, Uru Onye Akaụntụ
Uru 3 nke ngosi ngosi ihe ngosi
Oge: 2018-Sep-03 Hits:
Soro site na mmepụta nke akwụkwọ na-ebipụta akwụkwọ nkà na ụzụ nke ọhụrụ kachasị ọhụrụ, ngosipụta ngosipụta nke ákwà na-enweta nkwanye ùgwù dị ukwuu.
Ihe ntanetị a na-agbanye na ntanetị nke ntanetịpụta na nkà na ụzụ jikọtara ya na uru nke osisi na-enweghị ntụpọ na nkwụpụta nke nkwụnye ahụ, si otú a na-eme ka ngosipụta nke ákwà nwere uru dị ukwuu karịa ngosipụta ọdịnala,
E nwere ụdị ihe ngosi atọ dị iche iche, nke mbụ bụ nhọrọ kachasị ewu ewu, nke a na-agbatị n'osisi tubular ígwè.
Nke abụọ bụ Gbapụta ngosipụta, Nke nwere a etiti mmasị ka ákwà. The ndịna nọgidere na mmasị na e nwere ike gbasaa ma ọ bụ wetara azụ site mgbanwe nke okpokolo agba na-akpa ákwà. Ozugbo ngosi na meghere, na graphic ga-a enweghị nkebi mgbidi.
N'ikpeazụ bụ Ngosipụta windo mkpuchi igbe. Nke a ngosi nwere ike agbatị n'elu a metal etiti na pụrụ ịbụ mfe backlit ma ọ bụ n'akụkụ udo na-eji ihe ikanam ọkụ n'ime guzoro. The erughị ala na-akpa ákwà na-dụkọta na silicone n'ọnụ onye ọ bụla n'akụkụ, na okpokolo agba bụ na grooves fanye silicone gbaa n'onu graphic. The ákwà dị mfe a ga-kewapụrụ n'ime ndị grooves. nke a ụzọ ndị ahịa nwere ike iwerekwa osisi, na dị nnọọ ịgbanwe ndịna mfe.
Fabric ngosi site na iji e ji esiji ákwà sublimation ebi akwụkwọ nwere a elu mma mkpebi, doro anya-ebi akwụkwọ. N'ihi na ink na-Takọọ n'ime ákwà kama n'elu ya, ọ ga-adịghị mfe ịjụ oyi. Dai sublimation ibi akwụkwọ anyị chemical bonded nke ihe onwunwe nke dị ike karịa n'ibu bonded dị ka UV-ebi akwụkwọ na inkjet.
The aluminum etiti size bụ mgbanwe, nke nwere ike na ọ fọrọ nke nta ọ bụla size. Ot ịkwanyere panel kwesịrị ọtụtụ akụkụ iwulite a ibu panel, nke dị mfe iji chọta seams n'agbata ogwe. N'ihi na ákwà ngosi, ọ dị mfe imeta ndị enweghị nkebi n'elu. The silicone n'ọnụ nke akwa na-etinyere n'ime grooved, si otú ahụ na-akpa ákwà gbatia na-enwe uko.
The ákwà ngosipụta dị nnọọ obere n'ihi na osisi ike-agbajikwa ala n'ime obere iberibe, mgbe ahụ, ejikọrọ na njikọta na graphic nwere ike apịaji. Dum ngosi ike-nọ na a obere ngwugwu. Nke a na-eme ka ọ dị nnọọ fechaa na mfe ibufe. Ị na-adịghị echegbu onwe ha banyere ákwà ndịna ga crease, n'ihi na mgbe ha na-etinyere eku, ha ekwedo erukwa ha ma nọgide na-ndịna-emeputa uko.
Summary Fabric ngosi nke elu-edu na-ebi akwụkwọ na enweghị nkebi anya ka ákwà ngosi bụghị naanị mfe melite na ngosi na ihe, ma na-eme ka ngosipụta-ewu ewu n'etiti ndị ahịa. Nke ahụ bụ mfe ka kpọkọtara ma ọ bụ ebu ka omenala ila.
Nke gara aga: Enweghị ntụziaka ị ga-ama banyere ụlọ ọrụ mmemme
Ihe na-esote: Ihe ole na ole gbasara nnukwu oghere ngosi
Shanghai Chleh Exposing Industries Ltd guzobere na 2008, mgbe afọ itoolu nke ọganihu na-adịgide adịgide, anyị abụwo onye na-emepụta ihe ngosi na ihe omume na ọwụwa anyanwụ China.
Adreesị: B301, Building F, No. 3872, Shendu Road, Pujiang Town, Minhang Dist., Shanghai, China (Mainland)
+ 86 188 0031 9891 [Email na-echebe] [Email na-echebe]
Copyright © 2018 Shanghai Chleh Exposing Industries Ltd. Ikike niile echekwala.